Akukho kuvuza kwexabiso eliphantsi okubalulekileyo kwe-oyile yokuphefumla ioyile China Manufacturer
Inkcazo:Umoya oMnciphisayo oMtsha,Ukufuma komoya okuShibhile,Umoya oMncedisa ekunyuseni ioyile
Home > Imveliso > Ihotele Humidifier > Akukho kuvuza kwexabiso eliphantsi okubalulekileyo kwe-oyile yokuphefumla ioyile
Umzekelo No.: DT-1518
I-Strong kunye nobusuku bonke Iphutha: Ngomthamo omkhulu wee-300ml, i-ultrus diffuser ingasetyenziselwa njengendawo epholileyo yokuthoba isikhova esibonakalayo kwaye ihlala malunga neeyure ezisi-8.
I-BPA yasimahla & engenamanzi ngokuzenzekelayo: Isixhobo esenziweyo sokhuseleko sisebenza sisebenza sisenza ukuba iinkozo ezingamanzi zivale ngokuzenzekelayo xa amanzi ephelelwa. Kukhuseleke ngokupheleleyo ukusebenzisa ekulaleni, nkqu nakomntwana kunye nokukhulelwa.
I-whisper-cwaka: Ukwamkela iteknoloji ye-ultrasonic, i-oyile ebalulekileyo yokuhambisa ivumba elimnandi ngokuthula ngaphandle kwengxolo ephazamisayo. Uncedo lokulala ngokukhawuleza.
Ngokujonga okuziinkozo kwendalo, iaroma eyahlukileyo iyakha indlela ethambisayo nekulula ngayo iZen décor kwiofisi yakho nasekhaya, izisa ukuphumla kunye noxolo kuyo.
Umoya oMnciphisayo oMtsha Ukufuma komoya okuShibhile Umoya oMncedisa ekunyuseni ioyile Umoya onobuqili boMoya Umoya oMbiyo weHlabathi Umoya Wokuphefumlisa umoya Umoya oMdaka isiLwanyana Umoya oNgcolileyo kwiDepho yeKhaya